Faraska Fjord ee Norwey | Fardaha Noti
El Faraska Norwey ee Fjord Waa nooc faras ah oo ku fiican labbiska, enduro fardooleyda, boodboodka iyo, dabcan, shaqada guud ahaan.
Waa faras yar oo muuqda laakiin isagu, asal ahaan, leh qabyo adag. Waa mid ka mid ah fardaha ugu dhaqsaha badan ee jira waana sababtaas darteed gudaha Noorway ay muddo tobanaan sano ah wax weyn ka tari jirtay beerashada dalkaas. Sida magaceedaba ka muuqata, asalkiisu wuxuu ka soo bilaabmay Norway, gaar ahaan galbeedka dalka, iyadoo loo tixgelinayo mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn sinnaanta meeraha.
La Dhererka faraska ee Norwey Fjord Ma badna, maxaa yeelay waxay si dirqi ah uga dhaafaysaa hal mitir iyo badh guud ahaan dherer ahaan (1,52 sentimitir). Marka la eego miisaanka, way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran cuntada iyo cuntada aad ilaaliso. Suuradooda waxay u egtahay midabbo sida xabadka, caddaanka, xabadka cawl, iyo madow.
Marka laga hadlayo astaamaheeda jir ahaaneed, madaxiisu waa kuxiran yahay muuqaal ahaan, oo ay weheliyaan indho aad u weyn iyo indho qabow. Waxaa qabta a murqaha oo aad u gaaban iyo qoorta oo gaaban. Dhabarkiisa ayaa la dhihi karaa waa wax yar oo godan oo ay weheliso maroojis aan dhab ahayn oo taagan dhawr inji. Waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin gadaal wareegsan oo aad u muruqyo badan, taas oo iyadana lagu taageerayo lugaha adag inkasta oo ay gaaban yihiin, iyo dhogor yar.
Waxaa la ogyahay inay tahay a faras shaqeeya, firfircoonaan wanaagsan, jaalle ah marka loo barbar dhigo jinsiyadaha kale, nooca, aad u caqli badan oo aad loogu kalsoonaan karo, laga yaabee mararka qaarkood in aan la daalin oo aakhirka, aad u dabacsan
Noocani waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay awoowe dhammaan sinnaanta yurubiyanka casriga ah. Waxaa guriyeeyay qabiilooyinka Viking qiyaastii 2000 BC, kuwaas oo u haajiray Jasiiradda Scandinavian. Sidaa darteed, waa mid ka mid ah kuwa ugu daahirsan uguna da'da weyn taariikhaysan ilaa hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faraska Fjord ee Norwey